को को प्लेकार्ड बोकेर निस्कन्छन्, त्यसको पनि हिसाव किताव राख्छौं - Pahilo News
०६ असोज २०७५, शनिबार
सरकार गठन हुँदा जुन उत्साह र अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ नि ? के सरकारले काममा गति पक्रन नसकेकै हो ?
० तर पछिल्लो कालमा केही मन्त्रीहरु नै विवादमा आए । संचारमाध्यमहरुमा आइ नै रहेको छ, यसले सरकारप्रतिको विश्वसनियतामाथी नै प्रष्न उठेको छ नी र?
चुनौति भन्नाले खासगरी हामी निर्वाचन लडिरहँदाखेरीको प्रसंग हो । हामी सरकारमा गइरहँदाखेरीको जनताको अपेक्षा धेरै थियो । एकदमै छिटो परिवर्तन खोज्ने हाम्रो एकखालको मनोविज्ञान छ । त्यसमा तत्काल केही परिवर्तनहरु नदेख्दाखेरी मान्छेहरु रिमाक्टेड हुनसक्ने रहेछन् । त्यसो भएको कारणले म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने वाश्तवमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको हाम्रो उद्देश्यमा हामी दृढ छौं । केही समय तत्काल परिणाम नदेख्दाखेरी अलि अलि त्यसमा समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् । तर प्रष्ट हामीले भनेका छौं, कि कसैले पनि सरकारका काम कारवाही र कुनैपनि अफिस, अड्डा, जुनसुकै तह, जुनसुकै निकाय, राज्यका जुनसुकै अंग, त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीहरुले जनतालाई सेवा दिँदा कुनै पनि खालको लेनदेन नगरिकन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यदी त्यसरी कुनै सेवा प्रभाव गर्दा कुनै खालको भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप भएको छ भने त्यो कुरा सरकारको नोटिसमा हुन्छ । कसैलाई लाग्न सक्छ कि अहिले हामीले गरेका कुराहरु देख्दैनन्, पचाइहाल्छौं नी भन्ने । हामी ति सबै खोजी गछौं । कसैले पनि भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप गरेर जनतालाई दिने सेवामा प्रभावित पार्न मिल्दैन, सक्दैन । त्यसैले हामी यो अभियानमा लाग्दाखेरी त्यस्ता तत्वहरु पनि कतै यो सरकारलाई आलोचना गरिरहेका छन् ।
० पछिल्लो पटक डा।गोविन्द केसीको अनसनले बजार गर्माएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रको लागि संगसंगै लडेको र हिजो १४ वर्ष लोकतन्त्रकै लागि जेल बसेको प्रधानमन्त्रीले आज सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अब चुनाव हारेपछि आरोप लगाउनको लागि साथीहरुले केही विषय नपाएर शव्द खोजी खोजी आरोप लगाएको मात्र हो । हामीले त्यस्ता खालको चरित्र देखाउनु पनि छैन । हाम्रँे चरित्र त्यस्तो छँदा पनि छैन । हामी पुर्णत जनता र लोकतन्त्रमा विश्वास गछौं । केही उनले भनेका मान्छेहरु नियुक्ति नगरीदिाँदा त्यो अधिनायकवादी भयो भनेर भन् मिल्दैन । हिजोको कुनै बेला सत्ता सञ्चालन गर्दा उहााहरुले प्रकट गरेका क्रियाकलापहरु साँच्चै अधिनायकवादी थिए । तर आज वर्तमान सरकार त्यो चरित्रको पनि होइन, त्यो दृष्टिकोण पनि छैन र पुर्ण लोकतन्त्रका विश्वास गर्छ । त्यही विश्वासको आधारमा यो सरकार चलेको छ । त्यसैले शव्द खोजी खोजी आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । बुधवार साप्ताहिक
संविधानले जनतालाई शक्तिको स्रोत र केन्द्रविन्दु मानेको छ : प्रधानमन्त्री ओली
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार ग..
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठनपछि एकीकरणको बेलामा जस्तो उत्साह अहिले छैन र जनसंगठन तथा विभिन्न कमिटी समायोजनका ..
० महिलाको बलात्कारपछि हत्या, त्यसपछिको आन्दोलन र एक जनाको मृत्यु, पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरका यी सबै घटनाक्रमलाई ..
० पछिल्लो समयमा खासगरी निजामती कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको बीचको टकरावले काममा समस्या उत्पन्न हुने ग..
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको ..
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठनपछि एकीकरणको बेलामा जस्तो उत्साह अहिले छैन र जनसंगठन तथा व..
० महिलाको बलात्कारपछि हत्या, त्यसपछिको आन्दोलन र एक जनाको मृत्यु, पछिल्लो समयमा कञ्चनपु..
० पछिल्लो समयमा खासगरी निजामती कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको बीचको टकरावले कामम..
जनतालाई एक रुपैयाँ कर बढाएका छैनौं तर अनावश्यक स्यालहुइयाँ मच्चाइयो
देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर । त्यही सानो जिल्लाको आधाभन्दा बढि भौगलिक हिस्सा ओगट..
काठमाडौं, ६ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले पार्टी एकीकरण सम्पन्न भएको चार महिन..
स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिको बन्द फिर्ता
काठमाडौं, ६ असोज । स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिको नाममा जारी बन्द फिर्ता भएको छ । ..
सबै असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता हुन्छः संयोजक पाण्डेय
काठमाडौँ, ५ असोज । उच्चस्तरीय राजनीतिक अधिकार सम्पन्न वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद प..
काठमाडौँ, ५ असोज । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० ..
जनसरोकारका एजेण्डामा राष्ट्रिय सरोकार संसदीय समितिको तीन महत्वपूर्ण निर्णय
काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ३ ओटा महत्वपूर्ण जनसरोकारका एजेण..